Nsọpụrụ nke taa: ikpegara ndị nwụrụ anwụ ekpere
ỌR DE ỌG ofGODAD EGO NA-EKWU EGO
EKPERE EKPERE NA NWA ANYA
Chineke, onye puru ime ihe nile rue mgbe ebighi ebi, Onye nwe ndu na ndi nwuru anwu, juputa obi ebere n’ebe ihe nile ekonyere gi nọ, gbaghara umunne anyi nile ndi nwuru anwu na udo n’ihi na imikpu n’ime obi uto ha na-eto gi n’enweghi njedebe. Maka Kraist Onye-nwe-ayi. Amen.
Biko Dinwenu, maka ndị ikwu, ndị enyi, ndị maara anyị hapụrụ anyị afọ. Maka ndị nweworo okwukwe na gị na ndụ, ndị tụkwasịrị gị obi niile, ndị hụrụ gị n'anya, mana maka ndị na-enweghị ihe ọ bụla gbasara gị na ndị na-achọ gị n'ụzọ na-adịghị mma na ndị ị mechara kpughee onwe gị. dịka ị bụ n’ezie: obi ebere na ịhụnanya enweghị oke. Dinwenu, ka anyị niile zukọta otu ụbọchị ka anyị soro gị mee Eluigwe. Amen.
EKPERE KPỌRỌ FREEB FREER of theBARA EGO
Ekwuru ekpere a tupu obegide ya. Na-agụ ugboro iri atọ na Fraịdee na-akwụ ụgwọ 33 Mkpụrụ Obi nke Purgatory, ebe a na-agụghachi ugboro 33 na Fraịde ọ bụla n'efu 50 Mkpụrụ Obi nke Purgatory. Popes Adriano nke Isii, Gregorio XIII na Paolo VI gosipụtara ya.
Ana m asọpụrụ gị o Cross dị nsọ, na e jiri Iri Dị Nsọ nke Jisus Kraịst chọọ gị mma, kpuchie ya na ọbara ya dị oke ọnụ. M asọpụrụ Gị Chineke m, enịm ke cross m. Ana m asọpụrụ gị, oh Holy Cross, maka ịhụnanya nke Onye bụ Onyenwe m. Amen.
EKPERE EKPERE NA EGO
Mụọ Nsọ nke Purgatory, anyị n’echeta gị ka i mee ka ịdị ọcha gị dị ncha; Ichetara anyi inyere anyi aka, nihi na obu eziokwu na onweghi ihe ighara ime onwe gi, ma obu ndi ozo I gha eme otutu ihe. Ekpere gi di ike nke ukwuu ma n’abia n’ocheeze nke Chineke mee ka a naputa anyi n’aka ojoo, ojoo, nsogbu na nchekari nile. Nweta udo nke obi, nyere anyi aka na omume niile, nyere anyị aka n’oge na mkpa nke mmụọ na nke anụ ahụ, kasie anyị obi ma chebe anyị n'ihe egwu. Kpee ekpere maka Nna dị nsọ, maka iwuli Nzukọ Nsọ elu, maka udo nke mba dị iche iche, ka ndị mmadụ hụ na ịhụ n'anya ma kwanyere ya ugwu na otu ụbọchị anyị ga - eso gị n'udo na ọ Joyụ nke Paradaịs.
Otuto ato diri Nna, ezumike ebighi-ebi.
Nye onyinye maka mkpụrụ obi pọgatg
Chineke m nke mgbe ebighebi ma nwe obi uto, rubere isi ma nwekwa nnukwu ebube, Eji m obi ume ala nye gi Echiche, okwu, oru nile, ahuhu m tara ahuhu na ndi mu onwem gabu taa. Ana m akwado ime ihe niile maka ihunanya gị, maka ebube gị, iji mezuo uche gị, ka ịkwado mkpụrụ obi dị nsọ ma rịọ maka amara nke ezi nchegharị nke ndị mmehie niile. M bu n’obi ime ihe nile n’ebube na ebumnuche dị ọcha nke Jizọs, Meri, ndị nsọ niile n’eluigwe na ndị ezi omume nọ n’ụwa nwere na ndụ ha. Chineke m, nata obi m nke a, ma nye m ngọzi gị dị nsọ ya na amara ka m ghara ime mmehie mmadụ na-anwụ n'oge ndụ, yana ijikọ mmụọ nsọ na Mass dị iche iche a na-eme taa n'ụwa, na-etinye ha n'ọrụ zuru oke nke Mụọ Nsọ nke Purgatory na karie (aha) nke mere na ha sachara ma mechaa nwewa ah uh u. A na m atụnye ịchụọ aja, ọgbụgba ndụ na ahụhụ niile Providence gị guzobere maka m taa, iji nyere mkpụrụ obi Purgatory aka ma nweta ahụ efe na udo ha. Amen.
Rịọ arịrịọ maka Jizọs maka mkpụrụ obi Purgatory
Jizọs hụrụ n'anya kachasị ukwuu, taa anyị na-ewetara gị mkpa nke mkpụrụ obi nke Purgatory. Ha na-ata ahụhụ nke ukwuu ma nwee nnukwu mmasị ịbịakwute gị, Onye Okike ha na Onye Nzọpụta ha, ka ịnọnyere gị ruo mgbe ebighi ebi. Anyị na-akwado gị, O Jizọs, Mkpụrụ Obi nile nke Purgatory, mana ọkachasị ndị nwụrụ na mberede n'ihi ihe ọghọm, mmerụ ahụ ma ọ bụ ọrịa, na-enweghị ike ịkwadebe mkpụrụ obi ha ma nwee ike ịhapụ akọ na uche ha. Anyị na-ekpekwa ekpere maka mkpụrụ obi ndị a gbahapụrụ agbahapụ na ndị kacha otuto. Anyi na ario Gi obi ike ka O meere obi ebere n’ebe ndi ikwu anyi, ndi enyi anyi, ndi amara anyi na ndi iro anyi. Anyị niile bu n’obi itinye uche anyị niile ga-enyere anyị aka. Nabata, Jizọs kachasị obi ebere, ekpere ndị a dị umeala nke anyị. Anyi n’egosi ha ha n’aka nke Mary Kachasị Nsọ, nne gị na - apụn’anya, Onye Nna ochie dị nsọ St. Joseph, Nna gị na-ekwu okwu, na Ndị-nsọ niile na Paradaịs. Amen.
AKW IKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ FORBỌCH P NA ONBỌCH THE AH .́
Ndi kwesiri ntukwasiobi nwere ike inweta nnabata nke puru iche maka nkpuru obi Purgatory n'okpuru ọnọdụ ndia:
Nyochaa ụlọ ụka (ụka niile ma ọ bụ akwụkwọ nyocha)
- Pater na usoro oriri nsọ
- nnọchi anya (na ụbọchị asatọ ma ọ bụ ụbọchị na-eso ya)
- Onye mere ya dika uche nke Pope (Pater, Ave na Gloria)
SITE 1 rue 8 NỌM
N'ọnọdụ ndị a na-emebu, ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere ike nweta (otu ugboro n'ụbọchị) Nnukwu mbịara ga-emetụta mkpụrụ obi nke Purgatory:
- ikpee maka ndị nwụrụ anwụ